Nzuzo nke ASELSAN na aru oru ugbo ala | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNzuzo nke ndi ASELSAN na aru oru ugbo ala
21 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Kara, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey
smart mgboagha ọmụmụ na ala ugbo ala
Nchedo nke Turk, nke bụ otu n'ime ndị na-akwado ndị otu mgbakwunye ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa ASELSAN; na-eburu mgboagha nwere ọgụgụ isi maka tankị na ụgbọ agha.
35mm ngwa agha
Ndị ASELSAN mepụtara site na nkwado nke TÜBİTAK SAGE na MKE, KORKUT na Ngwaọrụ Njikwa Ọkụ (AIC) na ngwa agha 35mm, ihe mgbaru ọsọ kachasị bụ nke mgbagha ikuku. Emebere ya ebe a site na ịlele na ugboala ndị gbara agba ga-abawanye arụmọrụ pụtara ìhè. Na KORHAN 35mm Ngwá Ngwá Agha, nke ASELSAN na-enwe mmepe, iji mgboagha a ga-enye usoro ngwa ọgụ ahụ ihe dị mkpa. Mgboagha ahụ a tụpụtara bupụtara iji wee rụọ ọrụ dị iche maka ebumnuche nwatakiri agha, ụgbọ elu gbara ọkụ na sensọ dị oke egwu dị n'ụgbọ agha ndị agha.
Atụmatụ ikuku ịgbatị aselsan
Onu ogugu na mgboagha a na - ebuputa ihe ogugu a na - eme iji bulite urukuru ihe a na ebumnuche ya, ma bukwanye ihe dị iche iche nke mgboagha zube setara. Enwere ike ịtụfu ngwa agha a na-enweghị ihe ndozi ebe ọ dị mkpa ma nwee ike ịnye arụmọrụ kachasị elu megide ụgbọ agha, ụlọ na bọket.
Mgboagha a mepụtara na-eji otu ngwanrọ na ngwanrọ ahụ rụọ ọrụ dị ka 35 mm Ihe mmachi maka njikwa ọkụ. Ya mere, enwere ike iji ngwa agha a na usoro KORKUT na AIC + MÇT, yana iji 35mm Particle Ammunition mepụtara maka ebumnuche nchekwa ikuku na sistemụ dịka KORHAN.
40mm High Speed ​​Smart Grenade Launcher mgboagha
ASELSAN emepụtala 35mm High Speed ​​Smart Grenade Launcher Ammunition na-eji ahụmịhe ya maka ịzụlite ihe agha 40mm. Mgboagha a na-ekwu okwu nwere ikike imebi ikuku ma emechaa ya na ọpụpụ nke gbọmgbọm ahụ ma enwere ike iji ya rụọ ọrụ megide Obere UAV ma ọ bụrụ na etinye ya na ebumnuche n'azụ mmiri ara ehi yana na usoro IHTAR. Mgbapụta nke enwere ike ịtụpụ na egbe igwe19 arụnyere na sistemụ ngwa agha dịpụrụ adịpụ dị ka ihe mgboagha ga-eji rụọ ọrụ n'ụgbọ ala ndị nwere sistemụ SARP.
mm programmable mk arụ ọrụ
120mm ọgụgụ ọgụgụ isi tank
Ọrụ ASELSAN rụrụ n'ọhịa nke mgboagha na-agbasi ike gbasaa wee bido ịmụba ihe mgboagha. N'ọnọdụ a, enwere ọmụmụ ihe iji nye ihe kpatara 120mm HE ụdị ngwa agha. Mepụtara site na itinye ihe nkwuputa smart n'ime mgboagha 120mm HE, ihe mmuta nke 120 mm Smart Tank (120 mm ATM) ga-enwe ntanetị oge eletriki na mmetụta elektrọnik.
Site na igwe ndọrọ ego 120mm, ebumnuche ya kpochapụ iyi egwu / echedobeghị nke zoro ezo na ebe mgbochi / na-eche na nzuzo site n'inye ego. 120mm ATM ga - abụ ezigbo ihe ngwọta dị mma maka mbibi nke usoro dị oke egwu (dịka ọmụmaatụ periscopes) n'ụgbọ ndị a rụrụ na njigide ndị iro, ọ ga - enyo enyo na ihe ndị a agaghị enwe ike ije ozi na ike dị anya site n'ebe dị anya.
Mpempe Finned maka mgboagha 155mm
A na-achọkarị ihe ndị ọrụ chọrọ na arụmọrụ arụmọrụ site na idozi ụzọ ụgbọ elu nke ngwa agha na-enweta ike ziri ezi nke mgboagha. Ọrụ ASELSAN maka ebumnuche a malitere site na mmepe nke plọg echekwara nke gụnyere ọtụtụ ihe nkwụnye nke ga-arụ ọrụ na mgboagha 155mm, na ebumnuche ya ịgbasa ọmụmụ ahụ na caliber dị iche iche.
Ebe e si nweta ya: Directionrate Engineering System - Nnukwu Ọkachamara Injinia Gökmen Cengiz | Ngwa Amamịghe Smart na Tankị na Armored Veja - Aselsan Magazine Issue 105
Ugbo agha na mgboagha arụ ọrụ Zụlite 10 Days na-echere na Bilecik Station (Video)
Ọrụ nyocha nke ọgụgụ isi na Sakarya na-aga n'ihu ọsọ ọsọ
Usoro nhazi usoro okporo ụzọ siri ike Malite na Sakarya
Ọrụ Ụlọ Ọrụ Maka Ụgbọ Mmiri E Ji Amalite Malite na Sakarya
Ndị agha agha gbawara na Donguz ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Orenburg, Russia
Ngwongwo si na Marmaray
Ngalaba agha agha Russia rutere okporo ụzọ okporo ụzọ Trans-Siberia mechiri ruo nwa oge
Ntụle egwu: Nchọpụta agha na nhicha
Amamọkwa Smart Tank
Ngwaọrụ njikwa ọkụ
HE type tankị ngwa agha
Ngwá agha na akụrụngwa
Nnukwu ngwa ngwa Smart Grenade Launcher
IMM Ọrụ Nzukọ na 'Sustainable Smart Cities ogbako'
Ntụpụta nkà na ụzụ n'ime ụgbọ ala ụgbọ ala sitere na Chinese CSR maka ụzọ ụgbọ ala Ankara
Ọdịnihu nke ụgbọ njem ndị nwere ọgụgụ isi na eletriki ụgbọ ala